DOWNLOAD SHAREMAN NA KỌMPUTA N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2020
Enwere ike ịmepụta sistemụ arụmọrụ sitere na mgbasa ozi nwere ike ịchọrọ n'ọnọdụ dị iche iche, site na enweghị ike ịmalite ruo mgbe ọ dị mkpa iji Windows na kọmputa ọzọ. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere otu esi ebugharị Windows c flash mbanye.
Anyị na-ebu Windows site na osisi USB
Dịka akụkụ nke ihe onwunwe nke oge a, anyị ga-atụle nhọrọ abụọ iji bulie Windows. Nke mbụ ga-enye gị ohere iji usoro zuru ezu na ụfọdụ ihe mgbochi, nke abụọ ga-enye gị ohere iji PE na-arụ ọrụ na faịlụ na ntọala mgbe ọ gaghị ekwe omume ịmalite os.
Nhọrọ 1: Windows gaa
Windows To Go bụ Microsoft "bun" bara uru nke na-enye gị ohere ịmepụta nsụgharị dị mkpirikpi nke sistemụ arụmọrụ Windows. Mgbe a na-eji ya arụ ọrụ, osụbeghị os dị na diski ike, ma na ngwa ngwa USB. Usoro arụnyere bụ ngwaahịa zuru ezu na ụfọdụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, "Windows" dị otú ahụ agaghị enwe ike imelite ma ọ bụ weghachite ụkpụrụ ọhụụ, naanị ị nwere ike idegharị mgbasa ozi. Enweghi ike ịchọta TPM na nchọta ngwaike.
E nwere ọtụtụ mmemme maka ịmepụta draịvụl na Windows Iji Gaa. Nke a bụ AOMEI Onye Mmekọrịta Nkeji, Rufus, ImageX. Ha niile dị oke mma na ọrụ a, na AOMEI na-emekwa ka o kwe omume ịmepụta ụgbọelu na "ọnụ ọgụgụ" nwere ike ịnweta.
Gụkwuo: Guide Windows Creation Disk Disk
Nbudata dị ka ndị a:
Tinye ntinye USB flash n'ime ọdụ ụgbọ USB.
Rụgharịa PC wee gaa BIOS. Na ngwaọrụ desktọọpụ, a na-eme nke a site na ịpị igodo. Gbanyụọ mgbe ọdịdị nke logo nke motherboard. Ọ bụrụ na ị nwere laptọọpụ, tinye ajụjụ "Otu esi abanye BIOS" na igbe nchọnchọ na ibe nke ebe nrụọrụ weebụ anyị ma ọ bụ na ala nke kọlụm nri. O yikarịrị ka edererịrị ntụziaka maka laptọọpụ gị.
Kwalite ihe bu ụzọ.
Gụkwuo: Ịhazi BIOS ka ị buo site na windo mbanye
Anyị malitegharịa kọmputa ahụ ọzọ, mgbe usoro nke arụnyere na mgbasa ozi ga-amalite na akpaghị aka.
Atụmatụ ụfọdụ maka ịrụ ọrụ na usoro mkpanaaka:
Ọnụ ọgụgụ dị ala nke nchekwa nchekwa bụ 13 gigabytes, ma maka ọrụ nkịtị - ịchekwa faịlụ, wụnye mmemme na mkpa ndị ọzọ - ọ ka mma iji ụgbọala buru ibu, dịka ọmụmaatụ, 32 GB.
Ọ bụ ihe amamihe dị na iji ngwa mkpo ọkụ na ike iji arụ ọrụ na eriri USB 3.0. Ndị ọrụ dị otú ahụ nwere ọkwa dị elu nke data, nke na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe.
Edechila, dochie ma chebe site na ndekọ (nhichapụ) ozi na mgbasa ozi. Nke a nwere ike ime ka enweghi ike iji usoro arụnyere na ya.
Nhọrọ 2: Windows PE
Windows PE bụ ebe a na-edebe ya, ọ bụkwa naanị ya bụ mbipute kachasị mma nke "Windows", nke a na-emepụta mgbasa ozi nwere ike ime. Na disks ndị dị otú ahụ (ịpị ọkụ), ịnwere ike ịgbakwunye mmemme ndị dị mkpa, dịka ọmụmaatụ, scanners anti-virus, software maka ịrụ ọrụ na faịlụ na disks, n'ozuzu, ihe ọ bụla. Ị nwere ike ịmepụta mgbasa ozi onwe gị, nke siri ike, ma ọ bụ ịnwere ike iji ngwaọrụ ndị mmepe. N'adịghị ka Windows Go, nhọrọ a ga-enye aka ịbaa usoro dị ugbu a ma ọ bụrụ na ya efunahụ ya.
Na-esote, anyị na-eji kọmputa USB na-eji ihe omume AOMEI PE eme ihe, nke na-enye gị ohere ime nke a na-eji naanị faịlụ nke sistemụ arụmọrụ anyị. Biko rịba ama na mgbasa ozi a ga-arụ ọrụ na mbipute Windows nke ejikọtara ya.
Mwepụta AOMEI PE Nrụpụta ihe ma pịa bọtịnụ. "Na-esote".
Na windo na-esote, usoro ihe a ga-enye gị ibudata ụdị ọhụrụ PE. Ọ bụrụ na arụ ọrụ ahụ na Windows 10, mgbe ahụ, ọ ka mma ikwenye na nbudata, ịhọrọ nke kwesịrị ekwesị. Nke a ga - ezere njehie dị iche iche maka mmelite niile "ọtụtụ". A na - achọkwa nbudata ma ọ bụrụ na akụrụngwa a anaghị efu site na nkesa nke Windows arụnyere - ngwanrọ ahụ agaghị ekwe ka ị nọgide na-arụ ọrụ. N'okwu ahụ, ọ bụrụ na achọtaghị nbudata ahụ, ịkwesịrị ịchọta igbe dị n'akụkụ onyinye ahụ. Push "Na-esote".
Ugbu a, họrọ ngwa ndị a ga-etinye na mgbasa ozi. Ị nwere ike ịhapụ ya na nke ahụ. A ga-agbakwunye ihe omume sitere n'aka AOMEI Onye Nnyekọrịta Akara na AOMEI Backupper na nke a.
Iji tinye ngwa gị, pịa bọtịnụ ahụ "Tinye faịlụ".
Biko rịba ama na ngwanrọ niile ga-abụ obere nsụgharị. Na ihe ọzọ: ihe niile anyị ga-agba ma ọ bụrụ na anyị na-agbapụ na windo anyị ga-etinye naanị na RAM, yabụ na ị gaghị agụnye ihe nchọgharị ma ọ bụ mmemme maka ịrụ ọrụ ma ọ bụ vidiyo na mgbakọ ahụ.
Ogo kachasị nke faịlụ niile ekwesịghị igafe 2 GB. Ọzọkwa, echefula banyere bit. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji ngwa kọmputa na kọmputa ndị ọzọ, ọ ka mma itinye ngwa 32-bit, ebe ha nwere ike ịrụ ọrụ na usoro niile.
Maka mma, ị nwere ike ezipụta aha folda (a ga-egosipụta ya na desktọọpụ mgbe nbudata ya).
Ọ bụrụ na mmemme ahụ nọchiri anya otu faịlụ a na-ebipu, wee pịa "Tinye Njikwa"ọ bụrụ na nke a bụ nchekwa, mgbe ahụ - "Tinye nchekwa". N'ọnọdụ anyị a ga-enwe nhọrọ nke abụọ. Enwere ike ide ederede na mgbasaozi, ọ bụghị naanị ngwa.
Anyị na-achọ nchekwa (faịlụ) na disk na pịa "Họrọ nchekwa".
Mgbe ị na-ekenye data pịa "OK". N'otu ụzọ ahụ anyị gbakwunye mmemme ma ọ bụ faịlụ ndị ọzọ. N'ikpeazụ, anyị na-agbanye "Na-esote".
Mee ka mgbaghari ahụ dị iche "USB Boot Ngwaọrụ" ma họrọ eriri USB USB na ndepụta ndọpụta. Pịa ọzọ "Na-esote".
Usoro okike amalitela. Mgbe emechachara, i nwere ike iji mgbasa ozi dị ka e bu n'obi.
Hụkwa: Ntuziaka maka ịmepụta flash mbanye na Windows
Na-agba ọsọ Windows PE bụ otu ihe ahụ dị ka Windows Iji Gaa. Mgbe ị na-agbapụ site na windo ọsọ ọsọ ahụ, anyị ga-ahụ desktọọpụ maara (na n'elu iri, ọdịdị ahụ nwere ike ịdị iche) na mkpirisi nke mmemme na ọrụ ndị dị na ya, nakwa yana nchekwa nke nwere faịlụ anyị na ebe a ị nwere ike ịrụ ọrụ na diski, rụọ ndabere na weghachite, gbanwee ntọala dị na "Ogwe njikwa" na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ụzọ maka ịmepụta Windows site na mgbasa ozi nke na-ewepu nke a kọwara na nke a na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ na-enweghị mkpa maka faịlụ na draịvụ ike gị. N'okwu mbụ, anyị nwere ike iji usoro Windows anyị ngwa ngwa na ntọala ndị dị mkpa na akwụkwọ ọ bụla na Windows, na nke abụọ anyị nwere ike ịnweta akaụntụ anyị na data ọ bụrụ na os osụla. Ọ bụrụ na ọ bụghị onye ọ bụla chọrọ usoro mkparịta ụka, mgbe ahụ, ikpo ọkụ na WinPE dị mkpa. Lezie ihe okike ya anya tupu i nwee ike reanimate gị "Windows" mgbe agha ma ọ bụ nje ọgụ.